ओम शान्तिमा पाँच दिवसीय नि:शुल्क योग शिविर : हाडजोर्नी, न्युरो सम्बन्धी बिशेष योगाभ्यास तथा फिजियोथेरापी सेवा ! – ebaglung.com
२०७६ श्रावण ८, बुधबार १९:४६	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
कोपिला कंडेल, बागलुङ २०७६ साउन ८ । ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वबिद्यालय ओमशान्ति बागलुङमा बिहिबार देखी पाच दिवसीय निशुल्क योग बिज्ञान तथा स्वास्थ्य शिविर सन्चालन हुने भएको छ । ओम शान्तिले बुधबार बागलुङमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नि:शुल्क योग शिविर संचालन गर्न लागेको जानकारी गराएको हो ।
शिविर बिहान ७ बजे देखी ८.३० बजे सम्म र साँझ ५ बजे देखी ६.३० बजे सम्म संचालन हुने ब्रह्माकुमारी राजयोगिनी साबित्री दिदीले जानकारी दिईन् । उनले शारीरिक एबं मानसिक स्वास्थ्यको लागि योग शिविरमा सहभागी भएर स्वास्थ्य लाभ लिन सबैलाई आग्रह गरिन ।
योग शिविरको सहजिकरण योगाचार्य ब्रह्माकुमार डा. राम भाईले गर्ने ओमशान्तिले जनाएको छ ।
शिविरमा हाडजोर्नी तथा न्युरो सम्बन्धी बिशेष योगाभ्यास तथा फिजियोथेरापी सेवा समेत प्रदान गरिने योगाचार्य ब्रह्माकुमार डा. राम भाईले जानकारी दिए । रक्तचाप, मधुमेह, युरिक एसिड हृदयघात, पक्षघात, मस्तिष्कघात, हाडजोर्नीको समस्याबाट बच्ने उपाय लगायतका बिषयमा योगाभ्यास गराईने उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमकाबारेमा योगनाथ कंडेलले जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रमको संचालन ब्र्ह्माकुमार श्रीकृष्ण भाईले गरेका थिए ।